Thematic nuclei mubasa raCésar Vallejo | Zvazvino Zvinyorwa
Sezvo nevanyori vese, Cesar Vallejo yaive nhevedzano ye obsessions izvo zvinodzokororwa nguva nenguva mukati mebasa rake zvichipa chimiro chemusoro iwoyo watinopfupisa muchidimbu muchinyorwa chino.
Imwe yadzo kunzwa kwekuona isina kudzivirirwa uye chete munyika izere nekusarongeka uye zvakaipa zvinotambudza vanhu nekutyisidzira vanhu kukona kwese. Hakuna munhu, kunyangwe Mwari, anobatsira varume nevakadzi kubuda mutsime rekusurukirwa nekuzvidzivirira kwavakanyura.
Ndima ye nguva ndechimwe chekuda kwake. Kuswedera kwerufu, uko kuri padyo nekuswedera semhedzisiro yekuyerera kwekarenda, kunotambudza nyanduri anotizira kuzvisikwa nemumuviri wake senzira yekurarama zviripo pasina mutoro wenguva pfupi wekutakwa nekusingaperi wachi. Nekudaro, kuchembera kunonzwikwawo mupfungwa ...
Pakupedzisira iyo kurevererwa uye kubatana ndemamwe emabasa ebasa raVallejo, uyo anoziva kuti chokwadi chitema uye nekungobatsira vamwe nekugovana marwadzo avo ndipo paanokwanisa kuita chimwe chinhu kudzikisira mamiriro anorwadza anogara vanhu.
Mamwe mashoko - Nhoroondo yaCésar Vallejo
Mufananidzo - Peru 21
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Dzokororo misoro muCésar Vallejo